ktmkhabar.com - पारिवारिक खुशीको लागि अपनाउन यी उपायहरु !
पारिवारिक खुशीको लागि अपनाउन यी उपायहरु !
घर-परिवार त्यो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो सबै थकान भुलेर सहज महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईं कस्तो ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यसले कुनै फरक पार्दैन, केवल परिवारको साथ आनन्दका साथ बाँच्नको लागि परिवार एउटा उपयुक्त स्रोत हो । जब तपाईंको घरमा एउटा आमाबाबु र बच्चाहरू हुन्छन् त्यसलाई एउटा परिवार मान्ने गरिन्छ । यही परिवारले हामीमा खुसीको सञ्चार भर्छ भने त्यही खुसीमा नै हामीले सबै कुरा फेला पार्न सक्छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि परिवारमा खुसीको सञ्चार भर्न सकिएन भने त्यसले खुसी भन्दा झमेला निम्त्याउन सक्छ ।
आफ्नो परिवारलाई हरेक झण्झटबाट बचाउनु परिवारको मुलीको उत्तरदायित्व हो। व्यस्तताका कारण तपाईंलाई आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पर्याप्त समय नपुगेको हुन सक्छ । तर तपाईंले यो याद राख्नुपर्छ कि तपाईंको परिवार तपाईंको जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशहरू हुन्। त्यसकारण तपाईंको कामको साथमा तपाईंको परिवारलाई सुखी राख्नु पनि तपाईंको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।